Xaqa u leeyahay silcigu inuu ka soo horjeesto dhexdhexaadintiisa - Rabbi Michael Avraham
Xaqa uu u leeyahay dacwooduhu inuu ka soo horjeesto dhexdhexaadnimadiisa
Jawaabta > Qaybta: Halacha > Xaqa uu u leeyahay dacwooduhu inuu ka soo horjeesto dhexdhexaadnimadiisa
raynrayn La weydiiyey 3 bilood ka hor
Sida macquulka ah haddii ay jirto mitzvah qof walba si uu u dhexdhexaadiyo silcinta, markaa waxaa jira mitzvah loogu talagalay silcinta laftiisa inuusan ka soo horjeedin dhexdhexaadinta? Mise dacwooduhu weli xaq ma u leeyahay inuu ka soo horjeesto dhexdhexaadinta (iyo xataa ilaa heer uu dilo dhexdhexaadiyaha)? Waxay iila muuqataa in aanay jirin wax tixraac ah oo tan ku jira Sharciyada Mishnah Tawreed ee Gacankudhiiglaha iyo Ilaalinta Nafta, Cutubka A.
Su'aal tags: daba gal
mikyab Shaqaale Waxaa loogu jawaabay 3 bilood ka hor
Arintani waxay ka dhex muuqataa fannaaniinta. Gemara ayaa sheegay in haddii uu afgembi lahaa oo uu dili lahaa Pinchas oo ka yimid dawlad silcin ah in laga dhaafi lahaa. Sidoo kale malam F.A. Mahal gacan ku dhiigle wuxuu ka hadlayaa kordhinta sharcigan (ka warran gacan ku dhiigle shil ah oo dilay badbaadiyihii dhiiga, iyo kii dila rasuulku aayadda labaad waa in sidoo kale laga hadlaa).
Silcinuhu xaq uma laha inuu ka soo horjeesto dhexdhexaadnimada si la mid ah sida aanu xaq ugu lahayn inuu wax dilo. Dhab ahaantii isaga laftiisu waxay ahayd inuu naftiisa ka dilo dawlad silcinaysa (ama dabcan joojiya silcinta). Sidan ayaan halkan ku sharxay dhowr toddobaad ka hor sharciga ah in ergayga BD uusan fasax u haysan inuu dilo, sababtoo ah eedaysanaha laftiisa waa inuu isdilo. Dilalka dembiilayaasha waa mitzvah lagu soo rogay dadweynaha, iyo Rasuul B'D waa rasuul dhammaan (ay ku jiraan kuwa la silciyey).